Too: Wulite Dashboard Ntaneti Ntanetị | Martech Zone
Anyị bụ ndị nnukwu Fans nke visual arụmọrụ egosi. Ugbu a, anyị na-enye ndị ahịa anyị akwụkwọ akụkọ kwa ọnwa na, n'ime ọfịs anyị, anyị nwere nnukwu ihuenyo na-egosiputa ezigbo oge nke ndị ahịa anyị niile na-ahụ maka ịre ahịa ịntanetị. Ọ bụ ezigbo ngwá ọrụ - na-eme ka anyị mara mgbe niile ndị ahịa na-enweta nsonaazụ dị elu na ndị nwere ohere imeziwanye.
Ọ bụ ezie na anyị na-eji ugbu a Geckoboard, enwere ike ole na ole anyị na-abanye n'ime ka anyị na-aga n'ihu na-edozi dashboard, bulie ya, ma tinye ndị ahịa. Geckoboard nwere nnukwu nhọrọ wijetị ndị dị mfe ịgbakwunye na ịhazi na dashboard. Agbanyeghị, ha anaghị adaba nke ọma - yana oke nhọrọ, nhọrọ nzuzo.
-eto awade a n'ụzọ zuru ezu customizable dashboard na ọtụtụ uru:
Sizing - Enwere ike ị nweta wijetị nke ọ bụla karịa akụkụ dị mfe.
Nkwụsị - Kama otu nọọrọ onwe ha isi na bụla wijetị, ị nwere ike machie otutu data isi mmalite. Ya mere, chee mgbanwe na ego a na-enweta na ebe nrụọrụ weebụ akwụ ụgwọ!
Ọnọdụ data - Ọ bụrụ na wijetị mkpọ adịghị ezu, ịnwekwara ike ịgbakwunye data data nke gị site na ijikọ na isi data data ntanetị ọ bụla ma depụta arụmọrụ site na iji wijetị nke Grow.
Anyị na-echesiri echiche ike banyere ịzụlite omenala ntaneti ahia intaneti maka onye ọ bụla n'ime ndị ahịa anyị ma wepụ akụkọ anyị kpamkpam. Ọ bụ ezie na ọ ga-achọ ụfọdụ ọrụ maka anyị iji mezue mgbanwe ahụ, ọ ga-abụrịrị na a na-eri ego n'ozuzu na ịkwaga ndị ahịa anyị na ntụzịaka a. Enweghịkwa mkpa maka ịkọ akụkọ - ugbu a anyị ga-enwe data niile na ezigbo oge.
N'ime mkparịta ụka anyị na onye nnọchi anya onye na - etolite, ha nwere ike ịnwe ịdọ aka na ntị na - abịa n'isi nso. Nke ahụ ga - abụ ihe na - enweghị nsogbu maka mgbanwe anyị. Cheedị na a ga-amara gị ọkwa na oke ahịa ma ọ bụ na-ada otu ụzọ!
-eto bụ ụzọ kachasị mfe iji nweta data gị ma jiri anya nke uche hụ ya na akara ngosi oge. Mgbe atule arụmọrụ azụmahịa ọ nwere ike ịka mma. Ndị otu maara akara ahụ, na-egwuri egwu iji merie!
Njikọ ndị dị ugbu a gụnyere Act-on, Amazon Redshift, Amazon S3, Appraisal, Asana, Box, CSV, Custom Rest API, Channel Advisor, Database Connector, Dropbox, Facebook, Facebook Ads, Freshbooks, FTP / SFTP File access, Github, Google Adwords , Google Analytics, Google Spreadsheets, Harvest, HP Vertica, Infusionsoft, Insidesales.com, Instagram, Magento, Mailchimp, Marketo, Mixpanel, MongoDB, Mysql, Netsuite, NuoDB, Oracle, PostgreSQL, Quickbooks Online, Shopify, Shipstation, Salesforce, SQL ihe nkesa, Sugar CRM, Teamwork, Twitter, Vertica Database, Xero, Youtube, Akwụkwọ Zoho, Zoho CRM, onye na-ere ahịa Amazon, Amazon S3, Hubspot, Ntughari, na IQ IQ. Microsoft Dynamics CRM na-abịa n’oge adịghị anya.
Tags: Na-aga n'ihuRedshift Amazonamazon s3Onye na-ere ahịa AmazonNyochaAsanaBoxNdụmọdụ ChannelCSVOmenala Ezumike APIdashboardngwa dashboardikpo okwu dashboardNjikọ data njikọDropboxFacebookfacebook mgbasa oziFreshbooksNweta FTP / SFTP NjikwaGitHubgoogle adwordsGoogle AnalyticsAkwụkwọ ozi Googleeto etoowuwe ihe ubiHP VerticaokpokoroMicrosoftInsidesales.cominstagramigosi ihe ngosimagentomailchimpdashboard ahiaahịa dashboard ngwaahịaMixpanelMongoDBMySQLnetsuiteNnọọOraclePostgreSQLNgwa ngwa ntanetịUgboroIkwu IQndị ahịaMbupuụlọ ahịaSQL ServerCRM SugarMmekọrịta ọrụTwitterEbe nchekwa data VerticaXeroyoutubeAkwụkwọ ZohoZoho CRM
5 data disconnects na ajọ echiche echiche ahịa
Sep 13, 2016 na 12:25 PM
Chaị! Daalụ maka nnukwu edemede. Anyị nwere ụlọ ọrụ mgbasa ozi ole na ole dị egwu hụrụ n'anya na-eto eto. Anyị ga-achọ igosi onye ọ bụla nwere mmasị ngosi ngwa ngwa. http://www.grow.com/bi-demo/